အလင်းထိန်းညှိသူသည်သင်၏အလင်းကို domotize လုပ်ရန်အတွက်ဖန်တီးပါ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
လက်ကိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှသို့မဟုတ်အသံအမိန့်များမှတဆင့် virtual လက်ထောက်များမှတဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စမတ်မီးသီးများအမြောက်အမြားရှိသည်။ စမတ်အိမ် (သို့) စမတ်အိမ်သည်ဖက်ရှင်တွင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤစနစ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုစတင်လေ့လာလိုပါကသင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည် မှိုင်း အိမ်မှာ။
သင်တတ်နိုင်သလောက်လုပ်နိုင်သည် ထိန်းချုပ်မှုပြင်းထန်မှု သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလေထုကိုဖန်တီးရန်မီးခွက်သို့မဟုတ်မီးသီး၏။ သင်စာဖတ်သည့်အခါပိုမိုလေ့လာရန်၊ လေ့လာရန်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ အနားယူလိုပါက ပို၍ ကြိုဆိုသော ၀ န်းကျင်ကိုဖြစ်ပေါ်ရန်နည်းသည်။
1 dimmer ဆိုတာဘာလဲ။
2 Arduino နှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်မှု
Un မှိုင်းor luminous voltage ဆိုသည်မှာ voltage regulators သို့မဟုတ် triacs အပေါ် အခြေခံ၍ voltage ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောကိရိယာဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်မီးသီးသို့ရောက်ရှိသောဗို့အားကိုပြုပြင်သည်။ supply voltage ပေါ် မူတည်၍ ၎င်း၏ပြင်းထန်မှုသည်အတက်အကျရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်အီလက်ထရွန်းနစ်သင်တန်းအတွက်စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်အချိန်အတော်ကြာစုရုံးထားခဲ့ရသည့်ထိန်းညှိသူကိုပြလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ရိုးရှင်း။ စျေးပေါပြီး၎င်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည် မဆိုသမားရိုးကျမီးသီး။ ဖန်တီးရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်များဒီမှာ ...
ဤ DIY စီမံကိန်းအတွက်သင်လိုအပ်မည့်အရာမှာထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ၏စွမ်းရည်ရှိရန်ဖြစ်သည် ပစ္စည်းများ ရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်
Bifilar ကြေးနီ cable ကို လျှပ်စစ်ထောက်ပံ့ရေးဘို့။
ဖန်ဖျူး အစီအစဉ်အတွက် F ကိုကိုယ်စားပြု 5A ၏။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသင်ကတိုက်ရိုက်ဂဟေဖြစ်နိုင်သော်လည်း fuse ကိုင်ဆောင်သူကို သုံး၍ သင် fuse ကိုပြောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
insulator တွင်လည်း box ကို o embed to။ သင့်တွင်ပရင်တာတစ်ခုရှိပါက၊ ၎င်းကိုသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ရန်စသည်တို့ကို 3D ပုံနှိပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်တိုက်နယ်အတွက်အထောက်အပံ့နှင့်လျှပ်ကာအဖြစ်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ပုံနှိပ်တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့ သင့်လျော်သော circuit ကိုနှင့်အတူကမှတ်တမ်းတင်ရန်သို့မဟုတ် ဟုတ်ပါတယ်.
Triac BT137 ဖြစ်သည် y triac များအတွက်နစ်မြုပ်.
Diac BR100 သို့မဟုတ်အလားတူ.
2x 39nF / 250v polyester capacitors (C1 နှင့် C4) ။ နောက်ထပ် 2x 22nF / 250v polyester capacitors (C2 နှင့် C3) ။
linear potentiometer ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ (P1) သည်ပြင်းထန်မှုကိုလက်ဖြင့်ထိန်းညှိနိုင်ရန်အတွက် actuator တစ်ခုအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်။
ခုခံ၏ ၄၇၀KΩ 0,5w (R1) နှင့်အခြားခုခံ 100Ω 0,5w (R2) ။
ferrite (L) နှင့်အတူ Choke ကွိုင်။
Splice tab ကို output ကို (S) နှင့် input ကို (E) ကိုချိတ်ဆက်ရန်။
သံဖြူသံမဏိ (သင် breadboard ကိုအသုံးပြုရန်မသွားလျှင်) ။
ဝါယာကြိုး Stripper ။
ဤအရာအလုံးစုံနှင့်အတူ, သင်အောက်ပါထုတ်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း:
အားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ ရလဒ် ဒီလိုမျိုးဖြစ်သင့်သည်
y el လည်ပတ်မှု အောက်ပါရလဒ်ကိုသင်ရရှိသင့်သည်။
သင်လိုလျှင်ယခု အစိတ်အပိုင်းများကိုသိမ်းဆည်းပါ y arduino ကိုသုံးပါ dimmer ဖျော်ဖြေဖို့, သင်လည်းရိုးရိုးလေးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူတို့ရောင်း AC မှ 240V အထိမီးသေူနိုင်သည့် LED ဤအရာသည်သင်တို့အတွက်လွယ်ကူစေရန်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုရိုးရှင်းသည် ...
DC LEDs ၏ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းညှိရန်ရိုးရှင်းသောစီမံကိန်းများလည်းရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
မသန်စွမ်း ငါတို့ကိုမှိန်စေခြင်းငှါ၎င်း၊, Arduino နှင့်အတူဒါကိုနည်းလမ်းများစွာနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ သင်သည်ဤစီမံကိန်းကိုဖန်တီးရန်ယခင်အစီအစဉ်မှ element များစွာကိုပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သငျသညျကိုသုံးနိုင်သည် module တစ်ခု:
သင်ပင်သုံးနိုင်သည် ဝိုင်ဖိုင် module တစ်ခု စမတ်အလင်းကိုဖန်တီးရန် ...
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း အလေးသာ သူတို့တော်တော်များများ ...
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - အခမဲ့ Arduino သင်တန်း
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Dimmer: သင်၏အလင်းကို domotize ရန်သင့်ဖန်တီးပါ